Erayo Jaceyl ah - Baro erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh misana qalbiga farxadgelinayo
Waa maxay Jaceyl ah? Sideese ugu qori kartaa qof aad jaceyl u qaaday erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh misana qalbiga farxadgelinayo? Waan ku jecelahay abaayo/Abowe. Waan kaa helay runtii. Erayadaasi waa kuwo caajis ah oo aad ku weyneyso fursada dahabiga ah ee ku soo martay.
Si, aysan taa u dhicin baro maanta erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh misana holac ah. Hadaad isticmaasho erayadani meel walbaaa oo aad joogto weey ku soo raaadin/Ku soo raadin.
Erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh in aad adeegsato waa habka ugu fudud ee aad ku hanan karto ruuxa aaad jeceshahay.
Uma baahnid in aad qurux badan taahy uma baahnin in aad hanti fara badan leedaahy kaliya isticmaal eroyo macaan oo qalbiga farxad ku reebo.
Hadaba adeegso erayadaan soo socdo si,aad qalbigeeda/qalbigiisa u hanato una dareensiiso jaceylka aad u qabto.
Waan kuu riyaaqaa, waana sababta aan u noolahay hadii aniga xageyga ay sidaas tahay ogoow meel ka mid ah dunida waxaa ku nool qof riyoodiisu tahay dhoola cadeyntaada, waan ku jeclahay in ka badan inta aan wadajirno, waxaana heystaa wax walbo oo aan u baahanahay wada joogeena, waxaad tahay rajadeyda iyo dhamaan riyadeyda, wax dhib ah malahan wax kasta oo nagu dhaco, mustaqbalka wadajirkeena ayaa waxwalba ka weyn mar walbaana dhinacaaga ayaan taagnaan doontaa.
Jaceylku waa dulqaad iyo naxariis waxaan jecelnahay inaan runta soo bandhigno iyadoo aan qofna la niyad jebin doonin, mararka qaar waxaad tahay qofka dadka iigu dhow ee aan qalbiyada is dhaafsano wax walba.
Boqolaal qalbiyo aad ayey uga yar yihiin in ay qaadaan dhamaan jaceylka aan kuu qabo, maba ogeyn ebedkey macnaha jaceyl ilaa adiga aad iga soo hor baxday.
Waxaa tahay nolosheyda, noloshuna dhadhan malahan adiga la,aantaa, anigana farxad lama deriso adiga la,aantaa.
Waxaad tahay iftiinkeyga, waxaad tahay muraayadii qalbigeyga, waxaa tahay mustaqbalkeyga, maanta, beri iyo weligeedba.
Ha iloobin in aad tahay ruux ay nafteydu u riyaaqdo oo dadka kale iiga duwan.
Xusuusnow jaceylku waa dareen la isla sido oo qofba qofka kale dhankiisa ka daadihiyo.
Farxadeyda ugu weyn waa dhoolacadeyntaada iyo aan marwalbaa wehelkeyga tahay.
Qaraxii Soobe 14 oktober ee Magaalada Muqdisho
Taariikhda qaraxii soobe gaar ahaan qiso cajiib ah, qaraxii soobe 14 oktober waa maalin ku weyn shacabka Soomaaliyeed. Muqdisho caasimada dalkeena iyo guud ahaan dalka oo idil waxa ay u ahayd maalin m
Cali Yare oo Faceebook ku soo qoray arin muhiim ah
Cali Yare Cali oo ah Gudoomiyaha dhanka amniga iyo siyaasada ee maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa uu maanta Facebook kugula wadaagay arinta Galmudug iyo xiisadaha ka soo cusboonaaday. Cali Yare Cal